Umaka: ama-paas | Martech Zone
ULwesihlanu, February 21, 2014 Douglas Karr
Izinsizakalo zemakethe yaseSerchen zingaphezu kuka-10,000 XNUMX zabathengisi nezigidi zabathengi minyaka yonke. Inhloso yabo ukukhiqiza i-database enkulu yokulinganisa nokubuyekezwa okuzoxhuma abathengi nabathengisi ngezinsizakalo ezinhle kakhulu zamafu nesoftware ezigabeni ze-IaaS, PaaS ne-SaaS. IaaS - Ingqalasizinda njengesevisi imodeli yokuhlinzekwa lapho inhlangano ikhipha khona okokusebenza okusetshenziselwa ukuxhasa ukusebenza, kufaka phakathi isitoreji, i-hardware, amaseva nezinto zokuxhumana. Umhlinzeki wesevisi
Sicela uchaze iJargon Yezimboni kanye Nemibhalo
NgoLwesibili, ngo-Mashi 16, i-2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Ngisanda kufunda ukukhishwa kwabezindaba enkampanini ebikhombe abantu bezobuchwepheshe bezentengiso njengami. Kulokho kukhishwa kwabezindaba, babalula: OTT, PaaS solution, IPTV, AirTies hybrid OTT, kanye ne-OTT video service platform, OTT video services services provider, over-the-top video delivery through integrated integrated management system, hybrid demo of OTT, ukusakazwa kwevidiyo yedijithali (dvb-t), i-AirTies Air 7320 hybrid set-top box, IP Multimedia Product Line, amabhokisi asethelwe phezulu asekela izixazululo ze-OTT ezihlanganisiwe ze-